त'नाबमा हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुस् क्षणभरमै गायब हुन्छ तना'ब ! - Filmy News Portal Of Nepal
मानब स्वभाबपनी निक्कै अनौ’ठो लाग्छ । काम भएन भने पनि तना’ब नै हुन्छ र काम धेरै हुँदापनी तनाब’नै हुन्छ । अझ प्राय मानिसलाई चा’प, थ’कान र क’लहले मानिसमा त’नाव बढाउने गर्दछ ।
अझ गर्मी मौसममा जाडोको तुलनामा मानिसमा अत्य’धिक त’नाव हुने गर्दछ । गर्मीमा दिमागमा भएको कार्टिसोल नामक स्ट्रे’स हर्मोनहरू चार्ज हुन्छन् र त्यसको आ’गो रि’सका रूपमा बाहिर निस्कने गर्दछ । स्ट्रे’सले मानिसको मनलाई अ’शान्त र अस्थि’र बनाउँछ । हाम्रो त’नाब काम गर्न निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
मकै, ओखर र रसबरीको सेवनले पनि स्ट्रे’स कम हुन्छ । यी चीजमा ओमेगा–३ युक्त प्रोटिन र अमिनो एसिड हुने भएकाले यसले मूड सही बनाउँछ । दाल, सोयाबीन, ओटमील, सनफ्लावरका दानाले सेरोटोनिन हर्मोन बढाउन मद्दत गर्दछ । यसले मानिसलाई सका’रात्मक बनाउन सहयोग गर्दछ ।
केरामा प्राकृतिक चिनी र पोटेसियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । यसको सेवनले चिन्ता कम गराउँनुका साथै मानिसलाई पौष्टिकताको पनि काम गर्दछ ।बिहान उठेर केहिबेर घाममा बस्दा यसबाट भिटामिन डी पाउनुको साथै यसले अनावश्यक स्ट्रे’सलाई विलिन गराउँछ ।
यदि तपाईमा स्ट्रे’स बढेको महशुस भएमा निय’न्त्रणका लागी डार्क चकलेटको सेवन लाभदायक हुन्छ । डार्क चकलेटको एउटा सानो टुक्रा मुखमा राख्नाले स्ट्रेस कम हुन्छ । भिटामिन बी १२ को कमीले पनि मानिसमा स्ट्रे’सको स्तर बढ्ने गर्दछ । तसर्थ दूध, पनि र, दही र अण्डा लगायतका भिटामिन बी १२ पाउने खानेकुरा खानु पर्दछ ।
स्ट्रे’स कम गर्न सबैभन्दा भरपर्दो विकल्प भने परिवारसँगको घुलमिल हो । परिवारसँग मिलेर घरभित्र लामो कुरा गर्ने, खेल खेल्ने, हास्ने, बच्चाहरुसँग रमाइलो खेल खेलेमा पनि चम’त्कारिक रुपमा स्ट्रे’स कम हुन्छ ।’